In Malaysia’s Silicon Valley, Fortunes Flip as Virus Wrecks Trade War Gains | Myanmar Business Today
Home Business Regional In Malaysia’s Silicon Valley, Fortunes Flip as Virus Wrecks Trade War Gains
Semiconductor test equipment manufacturer Pentamaster Corp. saw its shares more than double last year as sales surged by aboutafifth – the steepest in its 29-year existence – as the firm becamearefuge from Sino-U.S. import tariffs.
The firm has since lowered its 2020 revenue growth outlook to flat from double digits, while its stock has fallen more than 10 percent since China in late January locked down the virus epicenter, Wuhan.
Home to factories owned by Intel Corp. and Broadcom Inc. alongside numerous other firms that supply tech majors including Apple Inc., the state accounts for about 8 percent of global backend semiconductor output.
While Penang firms saw record sales last year from customers seeking to curb reliance on China and escape U.S. tariffs, they themselves relied on China for as much as 60 percent of components and materials, with the rest coming from Europe or elsewhere in Asia.
Hotayi sources 60 percent of components such as printed circuit boards and multi-layer ceramic capacitors from China, for customers including Samsung Electronics, LG Electronics and Sharp Corp.
Its sales soared 40 percent last year. Goh said its 20 percent target this year could be at risk due to the supply issues, which could turn critical in one to two months’ time and badly hit production.
Pentamaster buys most of its components such as motors and sensors from Japan, Europe and China – the latter making up 20-30 percent. In the past few weeks, it has changed the design of some equipment to accommodate parts from outside China, Chuah said.
Analysts said other firms likely affected by the supply disruption include electronics manufacturing services companies VS Industry and ATA IMS, as they rely on China for up to 30 percent of components and material.
Semiconductor company Inari Amertron Bhd., whose radio frequency components are used in smartphones including Apple’s iPhones, might haveaweak second half after the U.S. firm flagged slowing production and demand in China, Malaysia’s AmInvestment Bank said.
Globetronics Technology Bhd.,acontract manufacturer of semiconductor-based products, told Reuters it did not directly source from China but that there wasasmall risk to its indirect supply chain.
“We had previously forecast the year-over-year growth for all semiconductors to be 5.5 percent in 2020,” said Kevin Anderson, senior analyst for power semiconductors at consultancy Omdia. With the virus, “now we think the range could be from -20 percent (worst case) up to 2.5 percent (best case), withamost likely of -3 percent.
Qdos, which makes flexible printed circuit boards and caters to five of the world’s 10 biggest smartphone makers, cut its sales growth outlook to “the low tens” from 20 percent forecast last year, said group chief executive Jeffrey Hwang.
“China isabig supply chain that has served the world really well, so companies will not stop going to China entirely, but probably they will cut down on dependence on China alone.”
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Silicon Valley of the East မှ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများမှာ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြောင့် တရုတ်နိုင်၍့မှ ထွက်လာသည့် ဝယ်လက်များထံမှ အမှာစာများ လက်မလည်အောင် ရခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင်လည်း အခြေအနေကောင်းများ ရခဲ့ပြန်သည်။
တစ်ဝက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစမ်းသပ် ကိရိယာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Pentamaster Corp. မှာ အမေရိကန်-တရုတ် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြောင့် အမြတ်ထွက်ကာ ရောင်းအားတက်လာခဲ့ရာ ၎င်း၏ ရှယ်ယာများမှာလည်း နှစ်ဆမျှ တက်လာခဲ့သည်။
သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂပိုး ကူးစက်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် စက်ရုံအလုပ်သမားများကို အိမ်ပြန်လွှတ်ထားရာ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကုန်ကြမ်းများမရဘဲဖြစ်နေသည်။ Pentamaster အနေဖြင့် ယခုအခါတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် အီတလီနိုင်ငံတို့မှ အခြား အရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေနေသည်။
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မူလ ဂဏန်းနှစ်လုံးရှိရာမှ လျှော့ချခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီ၏ စတော့ရှယ်ယာများမှာလည်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှလျော့ကျခဲ့သည်။
Pentamaster ၏ ခန့်မှန်းချက်သည့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး Penang ပြည်နယ်အနေအထားနှင့်ထင်ဟင့်နေသည်။
Intel Corp နှင့် Broadcom Inc တို့ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများက ပိုင်သော စက်ရုံများရှိသည့် အဆုိပါ ပြည်နယ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တစ်ဝက်လျှုပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုများ၏ ၈ ရာခိုင်နှုန်းမမှကို ထုတ်လုပ်နေသည်။
ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာလည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်တော့ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မှန်းချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၂ ဘီလီယံခန့်သာရှိမည်ဟု ယခင်နှစ်ကထက် သုံးပုံ တစ်ပုံအထိ လျှော့ချခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ယခုအနေအထားမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကူစက်ခံနေရသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘဏ္ဍာငွေ၊ အကျိုးအမြတ်များကို မည်သို့ လျှင်မြန် ကျယ်ပြန့်စွာ် ပြောင်းလဲပေးလိုက်သလဲဆိုသည်ကိုပြသနေသည်။
Penang ရှိ ကုမ္ပဏီများမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်မှီခိုမှုကို လျှော့ချလိုသော၊ အမေရိကန် အခွန်လွတ်လိုသော ဖောက်သည်များကြောင့် စံချိန်တင်ရောင်းအားမြင်တက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ၎င်းတို့ ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းနှင့် ကုန်ကြမ်း ခြောက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ရယူပြီး ကျန်ပစ္စည်းများကို ဥရောပနှင့် အာရှအခြားနိုင်ငံများမှ ရယူထားသည်။
SOURCEKrishna N. Das and Liz Lee (Reuters)
Previous articleMyanmar to Pursue Extension of Tax Waiver for Local Corn
Next articleAlipay to Open App to More Services to Take on Meituan